Mafashamo Akaunza Mashoko Akanaka kuNicaragua
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Basque Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Fijian Finnish Fon French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabuverdianu Kamba Kannada Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Korean Lari Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Maya Mongolian Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuItaly Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Oromo Persian Pidgin (West Africa) Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Tigrinya Turkish Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Valencian Vietnamese Welsh Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Mafashamo Akaunza Mashoko Akanaka
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Mafashamo Akaunza Mashoko Akanaka
Muna 2017, Zvapupu zvaJehovha 12 zvakakwira chikepe zvichibva kuMosquito kana kuti Miskito Coast iri muNicaragua. Chikepe chacho chaiva nezita rekuti Sturi Yamni. Mumwe aiva muchikepe chacho anonzi Stephen anoti, “Chinangwa chedu chaiva chekunokurudzira boka diki reZvapupu rinogara mune imwe nzvimbo iri kwayo yega tichivabatsira kuparidza mashoko akanaka mundima yavo yakakura chaizvo.”
Rwendo rweZvapupu izvi 12 rwakatangira paPearl Lagoon, uye vaizofamba kwemakiromita 200 nemurwizi runonzi Río Grande de Matagalpa. Vakanga vasingambozivi kuti zita rechikepe chavo, iro rinoreva kuti “Mashoko Akanaka” muchiMiskito, raizokosha chaizvo kuvanhu vanogara mumisha iri mujinga merwizi rwacho. Pashure pekunge vafamba maawa 12, tisingaverengi kumbozorora kwavakaita usiku, vakasvika kwavaienda, kunzvimbo inonzi La Cruz de Río Grande. Vakagamuchirwa nemufaro nehama nehanzvadzi 6 dzinogara munzvimbo yacho.
Manheru acho pane zvakabva zvaitika. Nechekunotangira rwizi rwaRío Grande de Matagalpa, kwakanaya mvura yaiva nemhepo ine simba. Pasina nguva, rwizi rwakanga rwazara uye rwakatanga kufashukira rukaramba ruchingowedzera kwemazuva maviri. Imba yeUmambo nedzimba dzakawanda muLa Cruz dzakazara mvura. Hama dzakanga dzashanya dzakabatsira vanhu vaigara munzvimbo yacho kuti vabude mudzimba dzavo. Vakawanda vavo vakaita mazuva maviri vachigara pamba pachimwe Chapupu chine imba ine nhurikidzwa.
Imba yeUmambo yemuLa Cruz yakazara nemvura
Zuva rechitatu, meya weLa Cruz akaenda kunokumbira rubatsiro kuZvapupu zvakanga zvashanya. Sezvo chikepe chavo chiri icho chega chakanga chakasimba zvekukwanisa kufamba nemurwizi urwu rwakanga rwakazara, meya wacho aida kuti vatakure vamwe vanhu vainobatsira kune dzimwe nzvimbo. Zvapupu zvakabvuma.
Mangwana acho, Zvapupu zvitatu zvakaperekedza vanhu vaya vaienda kunobatsira. Stephen anoti, “Iye zvino rwizi rwakanga rusisina kugadzikana. Miti yakakura yakanga yadzurwa yaiyangarara mumvura, uye mvura yacho yaiyerera zvine simba.” Pasinei nezvese izvi, chikepe chacho chakakwanisa kusvika kunzvimbo nhatu.
Zvapupu izvi zvitatu zvakashandisa mukana uyu kuti zvinyaradze vanhu vaigara munzvimbo idzi avo vaida kunyaradzwa chaizvo. Vakapa vakawanda vavo Mukai! ya2017 yaiva nemusoro wekuti “Kana Njodzi Ikaitika Zvii Zvatingaita?”
Vanhu ava vakatenda chaizvo kubatsirwa uye kunyaradzwa kwavakaitwa neZvapupu. Vamwe vakati, “Vanhu ava vanoda chaizvo kubatsira zvinhu pazvinenge zvakaoma.” Vamwewo vakati, “Vanoda vavakidzani zvechokwadi.” Pashure pekuona kushanda nesimba kwakaita Zvapupu kubatsira vavanonamata navo nevamwewo, vakawanda vava kuda kuteerera mashoko anonyaradza ari muBhaibheri.
Marco, mumwe wevakaenda nechikepe, achibuda muSturi Yamni kuti anoparidza mashoko akanaka kune vanogara mune mumwe musha
Chikepe chinonzi Sturi Yamni chakamira pedyo nemumwe musha wakazara mvura
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Mafashamo Akaunza Mashoko Akanaka
ijwex nyaya 17